“Duruufta maanta lagu jiraa …wax dibad lagu soo yagleelay ummadda waxba tari mayso” Col. Tacabir. – Radio Daljir
“Duruufta maanta lagu jiraa …wax dibad lagu soo yagleelay ummadda waxba tari mayso” Col. Tacabir.
Buuhoodle, Mar 17 – Xaaladda guud ee gobollada Sool, Sanaag & Cayn ayaa muddooyinkii danbe waxaa ay ahayd mid kacsan, ayna ka jireen xiisado colaadeed iyo dabaylo siyaasadeed, kuwaasi oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo maamulka Somaliland oo isagu deegaanadaasi faragelin dheeraad ah ku haya; waxaa intaa u dheer abaaro saameeyey dad iyo duunyada.
Dhinaca siyaasada, waxaa jira hadal-haynta shir la sheegay in ay abaabulayaan qurbajoogta deegaanka, lana sheegay in lagu qaban doono dalka dibadiisa, walow ay ka soo horjeesteen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka gobolka Cayn.
Col. Maxamed Cumar Cigaal ‘Tacabir’ oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Cayn, ahna sarkaal sare oo ciidamada ah ayaa booqasho uu caawa ku soo gaadhey istudiyaha Idaacada Daljir ee magaaladda Buuhoodle waxaa uu kaga hadlay xaaladaha ka taagan gobolka Cayn.
Col. Tacabir waxaa uu ku dheeraaday in xilligan dadka gobollada SSC aysan u baahnayn shirar dibada lagu qabto iyo kooxo bannaanka lagusoo abuuro, balse sida uu tilmaamay loo baahan yahay waxtar iyo in lagala qayb qaato difaaca deegaanka iyo taakulaynta dadka ay abaaruhu saameeyeen.
“Adeeroow, dadka deegaanku mansiirkooda iyagaa yaqaan, cidna wax ka weydiin maayaan, ninkii wax qabanayaa ha yimaado Kalshaale iyo Laascaanood. Ninkaan intaa samayn karin ha joojiyo waxyaabaha dhalanteedka ah” ayuu yiri Col. Tacabir.
Hadalka Col. Tacabir ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii dambe shaashadaha warbaahinta qaar laga dheehanayey warar tibaaxaya in ay socota qabanqaabada shir lagu qabanayo dalka Britain, kaasi oo la sheegay in ay abaabulayaan siyaasiyiin ka soo jeeda goboladda SSC, dad badani ay farta ku godayaan waxa looga hadlayo iyo waxyaabaha ka soo bixi kara shirkaasi.